Sisebenzisa njani (vs Wena) usebenzisa iMidiya yokuSebenza? | Martech Zone
Sisebenzisa njani (vs Wena) usebenzisa iMidiya yokuSebenza?
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 6, 2013 Douglas Karr
Andiqinisekanga ukuba nini ubushushu Uyile le inforgraphic, kodwa intle kangangokuba kuye kwafuneka ndibelane ngayo. Isizathu sokuba kulungile kukuba kukujonga okuthembekileyo kunye nokuthelekisa indlela iingcali zentengiso ezisebenzisa ngayo imidiya yoluntu xa kuthelekiswa nomndilili, umntu ongathengisiyo. Andikholelwa ukuba iinkokeli ezaneleyo kolu shishino zipeyinta umfanekiso onyanisekileyo wokusetyenziswa kweendaba zosasazo. Uninzi lwazo lundikhumbuza rick sheisters ngokukhawuleza gaphandle phaya.
Kuya kufuneka sisete kwakhona izinto esizilindeleyo kuwo wonke umthengi malunga nokuba ukusebenzisa kwabo kunye nokulandela kuya kujongeka njani kwimidiya yoluntu. Ngaphandle kokuba babe neqela leenkwenkwezi eli rock elihlala kuwo wonke umsitho kunye nokupapasha umxholo ongabalulekanga, abayi kuba neziphumo ezifanayo nomntu ofana nathi owenza oku ukuziphilisa. Mhlawumbi yiloo nto umxholo wentengiso ubuyile ukuze uthathe isithsaba kwimisebenzi yokuthengisa ziinkampani kunye nabantu- ngamajelo eendaba ezentlalo abonelela ngonyuselo olukhulu.
tags: FacebookGoogle +ubushushuiarhente yobushushuinstagramLinkedInukuthengisa kuthelekiswa nesiqheloTwilleyUkusetyenziswa kweendaba zosasazoHilltownTumblrTwitterusebenzisa imidiya yoluntuUkuqobisana
Izimvo zoKhuphiswano lweHolide kaFacebook enkulu